စက္ကန့် ၆၀လောက်နဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေဖို့ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ - Lifestyle Myanmar
သင့်ကျန်းမာရေးက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်၊ သို့သော် သင့်ကျန်းမာရေးကို နေ့စဉ်ဂရုစိုက်ခြင်းက တခါတရံမှာ အထူးသဖြင့် သင့်မှာ အလုပ်တွေရှုပ်နေရင် လွှမ်းမိုးတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပုံရပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေမယ့်အရာတွေပြုလုပ်ဖို့ တစ်မိလောက်သာ အချိန်ပေးကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ မနက်ခင်းမှာ ရေတစ်ခွက်သောက်ပါ
ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ ချက်ချင်းသောက်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုးဖို့ ရေသောက်တာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ရေက ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မနက်ခင်းမှာ ပထမလုပ်ရမယ့်အရာက ရေတစ်ခွက်သောက်ပါ။ ရေသောက်တဲ့အခါ ရေဖန်ခွက် ကြီးကြီးနဲ့သောက်ပါ။
တစ်ညလုံးအနားယူပြီးနောက် ရေဓါတ်ကို ပြန်ပြည့်စေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ညဘက်မှာ အိမ်သာသွားပြီးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အရည်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။
သင့်ကျောက်ကပ်၊ ဦးနှောက်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကို ပိုမြန်စေပါတယ်။
အိပ်ရာကနိုးလာပြီး သင့်အာရုံတွေကို ပိုမိုထက်မြက်စေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းက မလွဲမသွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်သော်လည်း အချို့သောအရာတွေက တခြားဟာထက် ပိုလွယ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြေးခြင်းပါ။ နံနက်ခင်းမှာ ပြေးဖို့အတွက် အချိန်မရှိဘူးဆိုရင် တစ်နေ့ကို ၁မိနစ်လောက်သာ ဆက်လုပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းအချို့ရှိပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ အရိုးဆုံးရှုံးမှုကို တန်ပြန်ပေးပါတယ်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြေးခြင်းက အရိုးသိပ်သည်းဆကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။
ပြေးခြင်းက အရိုးကျန်းမာရေး ၄ရာခိုင်နှုန်း တိုးစေပါတယ်။
ပြေးခြင်းက cardio လေ့ကျင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အားလုံး အသက်ရှုကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသက်ရှူတဲ့နည်းလမ်းကို အာရုံစိုက်ဖူးပါသလား? လေ့လာမှုတွေအရ ဖြေးဖြေးနဲ့ ဂရုတစိုက်အသက်ရှူခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအပေါ် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီရိုးရှင်းသော လုပ်ရပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို အပြည့်အဝရယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာက
၂ခါ ၃ခါလောက် ဖြေးဖြေးနဲ့ နက်ရှိုင်းစွာ အသက်ရှူခြင်းပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပါ။
ထိုသို့ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ ကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကောင်းတာတွေပဲ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ထိုမြင်ကွင်းတွေ (သို့) အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်တွေကို ချရေးပါ။
ထိုင်ရတာက တော်တော်လေး သက်တောင့်သက်သာရှိပေမယ့် လေ့လာမှုတွေအရ ပျင်းရိခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်တော်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်မတို့အချိန်အများစုကို ထိုင်ခုံမှာပဲ မကုန်ဆုံးသင့်ပါဘူး၊ ကြာကြာထိုင်တာက
-နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကို ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခများတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပိုများလာပါတယ်
အထိုင်နည်းသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် သေဆုံးနှုန်း ပိုများပါတယ်
အဝလွန်တဲ့ အန္တရာယ် တိုးလာနိုင်ပါတယ်
၅။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း အနည်းငယ်သောက်ပါ
ရေနွေးကြမ်းက ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်၊ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကျိုဖို့က တစ်မိနစ်သာ အချိန်ပေးရပါတယ်။
Green tea ကို တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်သောက်ပေးခြင်းက နှလုံးရောဂါတွေနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်က ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး ၎င်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်မှာ အင်တီအောက်ဆီဒင့်အမျိုးမျိုးပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ရယ်မောခြင်းက အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေအထောက်အထား အတော်များများရှိပါတယ်၊ ရယ်မောတာက သင့်ကို အောက်ပါဇီဝကမ္မ အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သဘာဝစိတ်ဖိစီးမှု သက်သာစေသော ဆေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
သဘာဝမှတ်ဉာဏ် မြှင့်တင်သူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စနစ်တကျ လက်ဆေးနည်းစနစ်မှာ အစမှ အဆုံးအထိ စက္ကန့် ၂၀သာ ကြာနိုင်သော်လည်း သိပ္ပံပညာက ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးမျိုးကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ လုံလောက်တာထက် ပိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆပ်ပြာ၊ ရေနဲ့ လက်ဆေးဖို့ အချိန်ယူပါ။ လက်ဆေးတာက ရောဂါတွေကို ကာကွယ်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒီရောဂါတွေထဲမှာ
ချောကလက်စားခြင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိကြောင်း သုတေသနတွေများစွာရှိပါတယ်၊ သူရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ချောကလက်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုများစွာက ပြသခဲ့ပါတယ်။
ချောကလက်မှာ Phenylethylamine ပါဝင်ပါတယ်၊ ဒါက ဦးနှောက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်
ချောကလက်စားခြင်းက ချိုမြိန်တဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရရှိစေပြီး သင့်ဦးနှောက်ထဲမှ dopamine ကိုတုပပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
ထို့အပြင် ချောကလက်မှာ အင်တီအောက်ဆီဒင့် မြင့်မားစွာပါဝင်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
၉။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဖက်ပါ
နွေးထွေးတဲ့ ပွေ့ဖက်မှုက သင့်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ?
ပွေ့ဖက်မှုက သွေးပေါင်ချိန်နဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ပွေ့ဖက်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေဖို့ သဘာဝပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါက ကျွန်မတို့ကို ပိုပြီးစိတ်သက်သာရာရစေသလို ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
၁၀။ စခရမ်ကို ဝေးဝေးကြည့်ပါ
လေ့လာမှုတွေအရ စခရမ်ကို ကြာရှည်စွာကြည့်ခြင်းက မျက်စိကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့နဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
၂၀-၂၀-၂၀ စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာပါ၊ မိနစ် ၂၀ အကြာကြီးကြည့်ပြီးရင် အနည်းဆုံး ပေ ၂၀ အကွာအဝေးရှိ အရာဝတ္တုတစ်ခုကို စက္ကန့် ၂၀ကြာ ကြည့်ပါ။
ကွန်ပျူတာ (သို့)ဖုန်းတွေကို အိပ်ရာထဲမှာ မသုံးပါနဲ့
အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေကို အိပ်ခန်းအပြင်ဘက်မှာ ထားပါ။